Hindiy: 158 qof oo ku dhintay burburka diyaarad waddankaas laga leeyahay | Xarshinonline News
Hindiy: 158 qof oo ku dhintay burburka diyaarad waddankaas laga leeyahay
Hargeysa, (NNN) – Diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee India Express oo ka kacday madaarka magaalada Dubai ayaa burburtay ka dib markii ay isku dayday inuu ku degto madaar ku yaala Koonfurta waddanka Hindiya taas oo ay ku dhinteen 158 qof, waxaanu shirlku yimid markii ay si khaldan ugu degtay madaarka isla markaana ay ka baxday dhabbaadii diyaaradaha.
Diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 737-800 kuna degaysay madaarka Mangalore ee gobolka Karnata waxa ay sidday 166 qof oo ay ku jiraan shaqaalihii diyaaradda, kaliya waxa ka badbaaday siddeed qof, sida uu sheegay agaasimaha shirkadda diyaaradaha ee Air India.
Shaqaalaha badbaadaha ayaa burburkii diyaaradda ka soo guray dad mayd ah oo jidhkoodu gubanayo, taas oo inta badan dadkii dhintay ay kuraastooda weli ku dhegsanaayeen.
Burburka diyaaradda ayaa yimid cimilada oo xumayd awgeed – roobab laxaad leh oo xataa hakiyey hawshii badbaadinta shaqaalaha. Waxa kale oo shilka sii xumeeyey cimilada daruuraha lahayd iyo aragtida duuliyaha diyaaradda oo ay ka xannibtay. Waxa kale oo ka qayb-qaatay madaarka oo ku yaala meel buuruhu ku badan yihiin taas oo ay ku adagtahay shaqaalaha dab-demiska inay gaadhaan goobtii shilku ka dhacayh.
Telefishannada waddankaas qaarkood ayaa sheegtay in diyaaraddu saaka abbaara 6:30 ay ku burburtay meel kayn ah oo ka ag dhow madaarka. “Diyaaraddu waxa ay u kala go’day laba. Waan ka booday diyaaradda markii ay burburtay. Waxa kale oo aan arkay laba qof oo iyaguna diyaaradda ka baxaya,” waxa sidaa yidhi nin magaciisa la yidhaahdo Abdullah oo isagu ka mid ahaa siddeeddii qof ee ka badbaaday diyaaradda oo u warramay telefishanak TV9. Mid kale oo ka mid ah dadka badbaaday oo magaciisa la yidhaahdo Pradeep ayaa u sheegay telefishan waddankaas laga leeyahay in taayirka hore ee diyaaraddu uu go’ay markii ay diyaaraddu isku dayday inay degto.
Source: NASIIB NEWS
← Haweenkii lagu dhacay mashruucii JIIF-OO-JAQ oo xisbiga UDUB lagu shirqoolay
“M/weynaha Jabuuti fikirkiisa ayuu hadlay, in ictiraafka Somaliland isaga la waydiiyana maaha.” →